Premium CBD အမှုန့်နှင့်ရေနံတရားဝင်ထုတ်လုပ်သူစက်ရုံကိုဝယ်ပါ
အထူးသဖြင့် လူငယ်များကြားတွင် CBD သည် မကြာသေးမီက ဆွဲဆောင်မှု ရှိလာခဲ့သည်။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် အသက် 20 နှစ်မှ 18 နှစ်ကြားလူများ၏ 29 ရာခိုင်နှုန်းသည် CBD ပုံစံအချို့ကိုအသုံးပြုကြပြီး အသက် 8 နှစ်အထက်လူများ၏ 65 ရာခိုင်နှုန်းသာ CBD ကိုအသုံးပြုကြသည်။ သက်လတ်ပိုင်းလူများသည်လည်း ငယ်ရွယ်သူများနှင့် အမီလိုက်လာကြပြီး ဤအသက်အရွယ်အုပ်စု၏ 30 ရာခိုင်နှုန်းဝန်းကျင်သည် ဆီ၊ အမှုန့် သို့မဟုတ် မှုတ်ပုံစံဖြင့် CBD သုံးစွဲမှုတွင် ပါဝင်ကြသည်။
သုံးစွဲသူများစွာသည်နာကျင်မှုကိုသက်သာစေရန်နှင့်စိုးရိမ်သောကနှင့်အခြားစိုးရိမ်သောကကဲ့သို့သောစိတ်မူမမှန်မှုများကိုသက်သာစေဖို့ဒီထုတ်ကုန်ကိုသုံးရန်တောင်းဆိုကြသည်။ ဆေးခြောက်၏တရားဝင်အခြေအနေပြောင်းလဲပြီးနောက် CBD ၏အသုံးပြုမှုသည် CBD နှင့်မတူပါ။ သို့သော်ဆေးခြောက်တရားဝင်မှုသည်၎င်း၏အသုံးပြုမှုတစ်ဝိုက်ရှိအမည်းစက်များနှင့်အပင်၌တွေ့သော cannabinoids အသုံးပြုမှုကိုကူညီပေးခဲ့သည်။
ဘာဖြစ်သလဲ CBD (Cannabidiol)
Cannabidiol (သို့) CBD သည်ဆေးခြောက်အပင်များမှဆင်းသက်လာသော phytocannabinoid ဖြစ်ပြီးဆေးခြောက်ပင်၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ၎င်းအားသူတို့၏နာကျင်မှုကိုသက်သာစေသည်။ သတိပြုရန်အရေးကြီးသည်မှာ cannabidiol သည်ဆေးခြောက်အပင်အမျိုးအစားဖြစ်သော်လည်းဆေးခြောက်ဟုရည်ညွှန်းသည်မဟုတ်ကြောင်းသတိပြုရန်အရေးကြီးသည်။ ၎င်းကိုလျှော်အပင်မှထုတ်ယူထားသောကြောင့်၎င်းသည်လူကို 'အမြင့်' သို့မရောက်နိုင်ဟုအဓိပ္ပာယ်ရသောမည်သည့် psychoactive ဂုဏ်သတ္တိမှမရှိပါ။
အထူးသဖြင့် Cannabis sativa အပင်သည်ဆေးခြောက်ပင်မှဆင်းသက်လာသောအခြား phytocannabinoid (Delta-9-tetrahydrocannabinol သို့မဟုတ် THC) ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများမှတစ်ဆင့်မြင့်မားသောခံစားစေနိုင်စွမ်းရှိသည်။ ဆေးခြောက်သည်ဆေးခြောက်ကဲ့သို့အခြားဆေးခြောက်အပင်များထက် THC ပိုမိုမြင့်မားသည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်အခြားအပင်အားလုံးတို့တွင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတက်ကြွစေသောဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်။ CBD သည် CBD ၌ကြွယ်ဝသော hemp အပင်မှဆင်းသက်လာသော်လည်းစိတ်ကြွစေသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများမပါဘဲ Cannabis sativa အပင်၏အကျိုးကျေးဇူးကိုခံစားလိုသူများအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောရွေးချယ်မှုဖြစ်စေသည်။
CBD နှင့် THC ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများသည်၎င်းတို့နှစ်ခုလုံးသည် ဦး နှောက်ရှိကွဲပြားသောဓာတုပစ္စည်းများသို့မဟုတ်အာရုံကြောပို့လွှတ်မှုများကိုသက်ရောက်မှုရှိသည်၊ သို့သော် cannabinoid ဒြပ်ပေါင်းတစ်ခုစီသည်ကွဲပြားသောဓာတုပစ္စည်းများနှင့်၎င်းတို့အပေါ်ကွဲပြားခြားနားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်၊ ထို့ကြောင့်ကျယ်ပြန့်ကွဲပြားသောရလဒ်များကိုထုတ်လုပ်သည်။
Cannabidiol ကိုဆေးခြောက်ပင်များတွင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမတက်ကြွသော phytocannabinoid အဖြစ် ၁၉၄၀ တွင်ကန ဦး ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သော်လည်း၎င်းသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက၎င်း၏ပင်မအပင်၊ လျှော်ပင်နှင့်ထိန်းချုပ်ထားသောပစ္စည်းများစာရင်းမှဖယ်ရှားခဲ့သည်။ သို့သော်၊ လူများသည် cannabidiol အမှုန့်များ၊ CBD ဆီများ၊ သို့မဟုတ်အခြား CBD ထုတ်ကုန်များကိုသူတို့၏သန့်စင်သောပုံစံသို့မဟုတ်ဓာတ်ဖြည့်ဆေးအဖြစ်အလားအလာရှိသောကုသမှုသို့မဟုတ်ပါဝင်ပစ္စည်းအဖြစ်သုံးရန်တရား ၀ င်နေဆဲဖြစ်သည်။
CBD ဆေးဝါးများကိုဝက်ရူးပြန်ရောဂါနှင့်အဖျားတက်ရောဂါများကိုကုသရန်အမေရိကရှိအစားအစာနှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့ကအတည်ပြုသည်။ ၎င်းကိုအခြားဆေးဘက်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအတွက်အကြံပြုသော်လည်း၎င်းသည်စောင့်ရှောက်မှုစံတစ်ခုမဖြစ်မီ FDA နှင့်အခြားနိုင်ငံများ၏ကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်များ၏ခွင့်ပြုချက်ရရန်လိုသေးသည်။
အမှန်စင်စစ်ပညာရှင်များသည် "CBD သည်လူ၏ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်တွင်မည်သို့လုပ်ဆောင်သနည်း" ဟူသောခေါင်းစဉ်ကိုဆွေးနွေးနေသည်မှာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပြီ။ အတော်လေးကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောအငြင်းပွားမှုကိုတွေ့ရှိခဲ့ပုံရသည်။ သိပ္ပံပညာရှင်များက CBD သည်၎င်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုရရှိရန် endocannabinoid စနစ်အပေါ်သွယ်ဝိုက်သောနည်းဖြင့်ပြုမူသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ CBD သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုမည်သို့လုပ်ဆောင်သည်ကိုနားမလည်မီပထမဆုံး endocannabinoid စနစ်ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်၌မည်သို့တည်ရှိသည်ကိုနားလည်ရမည်။
Endocannabinoid System (ECS) ဆိုတာဘာလဲ။
"Cannabinoid" သည် "ဆေးခြောက်" မှဆင်းသက်လာပြီး "endo" သည် "endogenous" ၏အတိုကောက်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း၌သဘာဝအရထုတ်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့် "endocannabinoid" ဆိုတာကကျွန်ုပ်တို့အတွင်းမှာသဘာဝကျကျဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဆေးခြောက်ကဲ့သို့သောအရာများကိုဆိုလိုတာပါ။
① Endocannabinoids များ
②လက်ခံသူများ (CB1, CB2) အာရုံကြောစနစ်နှင့်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင် endocannabinoids နှင့် cannabinoids တို့နှင့်ဆက်နွယ်သော (CB1 receptors သည်ခန္ဓာကိုယ်တစ်လျှောက်လုံးအထူးသဖြင့် ဦး နှောက်တွင်ရှိသည်။ လှုပ်ရှားမှု၊ နာကျင်မှု၊ စိတ်လှုပ်ရှားမှု၊ ခံစားမှု၊ တွေးခေါ်မှု၊ အစာစားချင်စိတ်၊ ။ CB2 receptors များသည်ခုခံအားစနစ်တွင်ပိုအဖြစ်များသည်။ ၎င်းသည်ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်နာကျင်မှုကိုထိခိုက်သည်)
zy အင်ဇိုင်းများ endocannabinoids နဲ့ cannabinoids တွေကိုဖြိုခွဲပေးတယ်
ECS သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာ၏သဘာဝအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ရုံသာမကအရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ endocannabinoid system (ECS) သည်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးကွဲပြားခြားနားသောအခန်းကဏ္မှပါ ၀ င်သည်။ ၎င်း၏အခြေခံအကျဆုံးတွင် endocannabinoid system သည်ခန္ဓာကိုယ်မှတဆင့်ပျံ့နှံ့နေသော cannabinoid receptors ၏ကြီးမားသောကွန်ယက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ လူသား၏ endocannabinoid system သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်တစ်သျှူးများအားလုံး၌တွေ့သော receptors များနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်သော cannabinoids ကိုထုတ်လွှတ်သည်။ phyto-cannabinoids (CBD) ကိုဒီစနစ်မြှင့်တင်ရန်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်မှထုတ်လုပ်သောဒြပ်ပေါင်းများအပြင်သင်လည်းယူနိုင်သည်။ endocannabinoid စနစ်၏အခန်းကဏ္ is သည်နှလုံး၊ အစာခြေဖျက်မှု၊ endocrine၊ ကိုယ်ခံအား၊ အာရုံကြောနှင့်မျိုးပွားစနစ်များအပါအ ၀ င်ဟန်ချက်ညီညီဆောင်ကြဉ်းရန်ဖြစ်သည်။ အတိုချုပ်အားဖြင့်၎င်းသည်သင့်အားကြားနေနေစေရန်လုပ်ဆောင်နေသည်။ Neutral သည်သင့်ခန္ဓာကိုယ်၏ကွဲပြားခြားနားသောနေရာများတွင်ကွဲပြားခြားနားသောအရာများကိုဆိုလိုသည်၊ ၎င်းသည်ဒြပ်ပေါင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အကောင်းဆုံးသောအရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် - ၎င်းသည်သင့်ခန္ဓာကိုယ်ရှိကွဲပြားသော receptors များပေါ်တွင်ကွဲပြားခြားနားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်။
CBD သည်ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုမဟုတ်ပါ၊ CBD နှင့် CBD ထုတ်ကုန်များကိုအသုံးပြုပြီးနောက်သင့်ကိုမထိန်းချုပ်နိုင်ပါ။ CBD သည်လူတစ် ဦး ၏စိတ်ကိုပြောင်းလဲအသုံးပြုခြင်းကိုမပြောင်းပါ။ သို့သော်၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းသိသိသာသာပြောင်းလဲမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီး၎င်းသည်သိသာထင်ရှားသောဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကျိုးကျေးဇူးများကိုပြသနေသည်။
သိပ္ပံပညာရှင်များသည်တစ်ချိန်က CBD သည် CB2 receptors နှင့်တွဲဖက်သည်ဟုယုံကြည်သော်လည်း၊ အသစ်သောလေ့လာမှုများအရ CBD သည် receptor တစ်ခုခုနှင့်တိုက်ရိုက်မချိတ်ဆက်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ ၎င်းအစား၊ CBD သည် endocannabinoid စနစ်ကိုသွယ်ဝိုက်သောအားဖြင့်လွှမ်းမိုးသည်ဟုယုံကြည်သည်။ Endocannabinoid System တွင် CBD ၏သွယ်ဝိုက်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်စုံတစ်ယောက်က CBD ကိုယူသောအခါ၎င်းဒြပ်ပေါင်းသည်သင်၏စနစ်နှင့် endocannabinoid system (ECS) သို့ရောက်သွားသည်။ cannabidiol သည်သီးခြားစည်းနှောင်မှုဆက်နွယ်မှုမရှိကြောင်းတွေ့ရှိသောကြောင့်သိပ္ပံပညာရှင်များက CBD ၏ကုထုံးအကျိုးကျေးဇူးများမှတဆင့်ဖန်တီးခဲ့သည်။ သွယ်ဝိုက်သောလုပ်ဆောင်ချက်။
CBD သည်ဖက်တီးအက်ဆစ် amide hydrolase (FAAH) ကိုတားဆီးပေးပြီး anandamide ကိုပြိုကွဲစေပြီးအားနည်းစေသည်။ CBD သည် anandamide ၏အာရုံစူးစိုက်မှုကိုမြင့်တက်စေသော FAAH ကိုအားနည်းစေသည်။ Anandamide ကို "bliss molecule" ဟုသတ်မှတ်ပြီးအပျော်အပါးနှင့်လှုံ့ဆော်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်အဓိကအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်သည်။ တိုးမြှင့် anandamide ၏အာရုံစူးစိုက်မှု endocannabinoid system ကိုအပေါ်အပြုသဘောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါသည်။
CBD သည် fatty acid binding protein (FABP) ကိုလည်းအကျိုးသက်ရောက်သည်။ FABP ပရိုတိန်းများသည် FAAND ပရိုတိန်းသည် anandamide နှင့် synapse အပြင်ဘက်ရှိအင်ဇိုင်းများကိုသယ်ဆောင်။ FAAH မှဖြိုခွဲဖျက်ဆီးခြင်းဖြစ်သည်။ CBD သည် FABP ၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်အပေါ်သက်ရောက်မှုရှိပြီး anandamide နည်းသွားသည်ဖြစ်ခြင်းကြောင့် anandamide ပိုမိုမြင့်မားသောအာရုံစူးစိုက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
နောက်ဆုံးတွင် CBD သည် TRPV-1 ဟုခေါ်သော G-protein receptors နှင့်သူ့ကိုယ်သူချည်နှောင်သည်။ TRVP-1 receptors များသည်နာကျင်မှု၊ ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်နှင့်ရောင်ရမ်းခြင်းကိုထိန်းညှိပေးသည်။ သိပ္ပံပညာရှင်များသည် CBD သည်ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်နာကျင်မှုသက်သာစေရန်အထောက်အကူပြုသည်ကိုဤသို့တွေ့ရသည်။
တစ်နည်းအားဖြင့် Endocannabinoid စနစ်သည် homeostasis တွင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုထိန်းသိမ်းရန်ကူညီသည်။ မျိုချမိသောအခါ, Cannabidiol ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာ၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုပိုမိုချောမွေ့စွာတိုးတက်စေရန်ကူညီနိုင်သည်။ CBD သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာရှိ cannabinoid, dopamine, opioid နှင့် serotonin receptors များနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာ၏လုပ်ဆောင်ချက်များစွာကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်သည်။
CBD ၏ကျော်ကြားမှုနှင့်ကျော်ကြားမှုသည်လူ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ရှိကွဲပြားခြားနားသောအကျိုးကျေးဇူးများကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်၊ အများအားဖြင့်သိပ္ပံနည်းကျအထောက်အထားများဖြင့်ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသောထိုလေ့လာမှုများမှရလဒ်ဖြစ်သည်။ ဥပဒေရေးရာနှင့်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးမပြုမီသုတေသနများစွာသည် CBD ၏အလားအလာနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများကိုလေ့လာရန်သာမကဒြပ်ပေါင်း၏လုံခြုံမှုနှင့်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအဆိပ်ကိုအကဲဖြတ်ရန်အကဲဖြတ်ရန်လည်းသုတေသနများစွာပြုလုပ်ခဲ့သည်။
လူအများစုသည်ဤအကျိုးအတွက် CBD ကိုအထူးသုံးလိုကြသည်။ ဆေးခြောက်ကိုအကိုက်အခဲပျောက်ဆေးအဖြစ်သုံးခဲ့သည့်မှတ်တမ်းများမှာဘီစီ ၂၉၀၀ အထိဖြစ်သည်။ ဆေးခြောက်ပင်များသည်အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးများအဖြစ်လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီးခန္ဓာကိုယ်၌ cannabinoid receptor ကို၎င်းတို့၏လုပ်ဆောင်မှုကြောင့်နာကျင်မှုအမျိုးမျိုးကိုသက်သာစေနိုင်သည်။
လူ့ခန္ဓာကိုယ်တွင်အိပ်စက်ခြင်း၊ အစာစားချင်စိတ်နှင့်ကိုယ်ခံအားတုံ့ပြန်မှုကဲ့သို့အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်များစွာအတွက်ကူညီရန် endocannabinoid စနစ် (ECS) ရှိသည်။ ECS သည် cannabinoid receptor ကိုလုပ်ဆောင်ပြီး endogenous cannabinoids များလွှတ်ပေးရန်အတွက်တာဝန်ရှိသည်၊ နာကျင်မှုကိုသက်သာစေသည်၊ ခုခံအားတုံ့ပြန်မှုကိုမြှင့်တင်ခြင်း၊ ဆာလောင်မှုနှင့်အိပ်စက်မှုသံသရာကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည်။ CBD နှင့် THC နှစ်ခုလုံးသည်ပါးစပ်မှသော်လည်းကောင်း၊ နှုတ်ယူသောအခါဖြစ်စေ cannabinoid receptors များနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ပြီးပေါင်းစပ်သည်။ ဤ exogenous cannabinoids များသည် endogenous cannabinoids နှင့်ဆင်တူသည်၊ သူတို့၏ရလဒ်များသည်အနည်းငယ်ပိုချဲ့ကားနိုင်သော်လည်း၎င်းတို့သည်တူညီသောရလဒ်များကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်သုတေသီများကဆိုးဝါးသောရောဂါများကြောင့် neuropathic နာကျင်မှုရှိသောလူနာများတွင် cannabidiol အသုံးပြုခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကို ၂၀၁၇ အထိထုတ်ဝေခဲ့သောစာပေအားလုံး၏ meta-analysis ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ဤ meta-analysis တွင်ပါ ၀ င်သောလေ့လာမှုတဆယ့်ရှစ်ခုတွင်လူနာအများစုသည် 2018mg THC နှင့် 2017 mg CBD ကိုပေါင်းစပ်ပြီးနောက်လူနာများနာကျင်မှုကိုသက်သာစေခဲ့သည်။
ထို့ပြင်ဤပေါင်းစပ်မှု၏အပြင်းထန်ဆုံးဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများသည်ပျို့ခြင်း၊ ပါးစပ်ခြောက်ခြင်းနှင့်အော့အန်ခြင်းတို့ဖြစ်ကြောင်းလေ့လာမှုများအားလုံးတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဤဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများသည်လူနာတိုင်းတွင်မရှိသလိုထိခိုက်ခံရသူများတွင်ပြင်းထန်သောလုံလောက်သောတုံ့ပြန်မှုမရှိပေ။ ၎င်းသည် THC နှင့် CBD အသုံးပြုမှုကိုအတန်အသင့် neuropathic နာကျင်မှုကိုကုသနိုင်ပြီးဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုအနည်းငယ်သာခံနိုင်ရည်ရှိသည်ဟုသုတေသီများကကောက်ချက်ချသည်။
CBD ကိုအကိုက်အခဲပျောက်ဆေးအဖြစ်သုံးရန်ပံ့ပိုးပေးသောသုတေသနများစွာတွင်ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများစွာရှိသည်။ သုတေသနတစ်ခုသည်၎င်း၏ immunomodulatory နှင့် anti-inflammatory ဂုဏ်သတ္တိများအတွက် CBD ၏အသုံးပြုမှုကိုအာရုံစိုက်ခဲ့သည်။ အီတလီလေ့လာမှုကိုတိရစ္ဆာန်ပုံစံများတွင်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဤလေ့လာမှု၌သုတေသီများသည်ပါးစပ်၌ CBD ကို သုံး၍ ကြွက်များတွင်နာတာရှည်ရောင်ရမ်းနာကျင်မှုကိုတိုးတက်စေရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ CBD ကို ၂၀ မီလီဂရမ်/ကီလိုဂရမ်ရှိသောနာတာရှည်ရောင်ရမ်းနာကျင်သောကြွက်များအားပေးသောအခါကြွက်များကနာကျင်မှုကိုသိသိသာသာကျဆင်းစေသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ထို့အတူသူတို့သည် sciatic အာရုံကြောဒဏ်ရာနှင့်ကြွက်များတွင် neuropathic နာကျင်မှုအပေါ် CBD ၏သက်ရောက်မှုများကိုလေ့လာခဲ့ပြီး၎င်းသည်နာကျင်မှုကိုသက်သာစေသော်လည်း CBD သည်နာတာရှည်အခြေအနေများတွင်အကျိုးအရှိဆုံးဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။
လူများစွာသည်နာတာရှည်နာကျင်မှုအတွက် CBD ဆီသို့မဟုတ်ဖြန်းဆေးများသို့မဟုတ်ဆေးပြားများကို ယူ၍ ၎င်းသည် CBD နှင့်ဆေးခြောက်၏လူကြိုက်များစေသောအဓိကအကြောင်းအရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် CBD နှင့်ဆေးခြောက်ကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်သုံးစွဲမှုကို ဦး တည်စေသောထိန်းချုပ်မှုအရာများစာရင်းမှ CBD ကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်၎င်းကိုပေါင်းစည်းစေသောအခြားအကျိုးကျေးဇူးများလည်းဖြစ်ခဲ့သည်။
တက်ခြင်းသည်အများအားဖြင့်ဝက်ရူးပြန်ရောဂါနှင့်ဆက်စပ်သော်လည်းအခြားရောဂါများစွာသည် Dravet Syndrome, Tuberous Sclerosis Syndrome စသည်ဖြင့်အဖျားတက်စေနိုင်သည်။ CBD ထုတ်ကုန်များ၏စင်ကြယ်သောပုံစံသည် anti-epileptic သို့မဟုတ် seizure အကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိသည်ဟုယူဆထားသည်၊ သို့သော်ဤယူဆချက်ကိုထောက်ခံသောခိုင်မာသောသိပ္ပံနည်းကျအထောက်အထားများမကြာသေးမီကဖြစ်ခဲ့သည်။
ကန ဦး တွင် CBD ကိုအထူးသဖြင့်ဝက်ရူးပြန်ရောဂါနှင့်အခြားအဖျားတက်ရောဂါများကုသရာတွင်အထူးအငြင်းပွားစရာများရှိခဲ့သည်။ CBD သည် anticonvulsant ဖြစ်သော်လည်းအချို့သောပြင်းထန်သောအခြေအနေများတွင်၎င်းသည် pro-convulsant အဖြစ်ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ သို့သော်ကွဲပြားသော double-blind, randomized လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်ပြီးသည့်အခါ၎င်းသည်ထိုသို့မဟုတ်ပါ။ CBD နှင့် THC နှစ်ခုလုံးကိုသဘာဝအားဖြင့်အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးများဖြစ်သည်။
လေ့လာမှုများစွာ၏ရလဒ်အနေနှင့်၎င်းသည်အခြား CBD ထုတ်ကုန်များထဲမှသန့်ရှင်းသော CBD အမှုန့်များနှင့် CBD လျှော်ဆီအနှစ်များကို ၀ က်ရူးပြန်ရောဂါ၊ Dravet Syndrome၊ Tuberous Sclerosis Syndrome နှင့် Lennox-Gastaut Syndrome တို့ကြောင့်ဖြစ်တတ်သောတက်ခြင်းကိုကုသပေးနိုင်သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဤရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအပြီးတွင် GW ဆေးဝါးများသည် Epidiolex အမည်ရှိစင်ကြယ်သော CBD အာရုံစူးစိုက်မှုပါ ၀ င်သည့်ဆေးဝါးကိုတီထွင်ခဲ့ပြီး FDA ထောက်ခံချက်ကိုပင်အဖမ်းအဆီးနှိမ်နင်းရေးဆေးဝါးအဖြစ်သုံးခဲ့သည်။
သို့ရာတွင်၎င်းသည် CBD ခွဲထုတ်ထုတ်လုပ်သူများထံမှ ၀ ယ်ယူသော CBD ထုတ်ကုန်များသည် Epidiolex ကဲ့သို့ရောဂါများကိုထိန်းချုပ်ရာတွင်ထိရောက်မှုရှိမရှိမသိနိုင်သေးပါ။ အထူးသဖြင့်၎င်းသည် CBD အမှုန့်ထုတ်လုပ်သူများနှင့် CBD အမှုန့်ရောင်းချသူများအားလုံးအမှန်တကယ်သန့်စင်သော CBD အမှုန့်များနှင့်ထုတ်ကုန်များကိုပေးသော်လည်းအာရုံစိုက်သလောက်မသန့်ရှင်းသောညစ်ညမ်းသောထုတ်ကုန်များဖြစ်သည်။ အရည်အသွေးမြင့်၊ သန့်စင်သော CBD ထုတ်ကုန်များရောင်းချသောအတည်ပြုရောင်းချသူများထံမှသာ ၀ ယ်ရန်လုံးဝအရေးကြီးသည်။
သုတေသီများသည် CBD နှင့် THC ကိုအတူတကွသုံးခြင်း (သို့) ကုသမှုကိုခံနိုင်ရည်တက်ခြင်းကိုကုသရာတွင် CBD တစ်ခုတည်းကို သုံး၍ အကဲဖြတ်ရန်ကြိုးစားနေသည်၊ ၎င်းသည်လူနာများ၏အသက်အန္တရာယ်ကိုကြီးမားသောခြိမ်းခြောက်မှုဖြစ်စေပြီးလူနေမှုဘ ၀ သိသိသာသာကျဆင်းစေသည်။
ယခု CBD အမှုန့်နှင့်ဆီများကိုမှာယူပါ။
cannabidiol ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်များစွာသောတိရစ္ဆာန်ပုံစံများတွင် anxiolytic နှင့် anti-depressant သက်ရောက်မှုရှိသည်ကိုပြသထားသည်။ ကြွက်များအားဖျော်ဖြေသည့်ဘရာဇီးလေ့လာမှုတစ်ခုတွင် CBD သည်စိတ်ကျရောဂါကြွက်များ၏ hippocampus တွင်လူသိများသောစိတ်ကျရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးတွင် imipramine ကဲ့သို့တူညီသောအာနိသင်ရှိသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ စိတ်ကျရောဂါအပေါ် cannabidiol ၏သက်ရောက်မှုများကိုအကဲဖြတ်ရန်နှင့် CBD သည်ထိုရလဒ်များကိုမည်သို့ထုတ်လုပ်နိုင်ကြောင်းအတိအကျအကဲဖြတ်ရန်လေ့လာခဲ့သည်။
CBD သည် serotonin receptors များ၊ အထူးသဖြင့် 5HT-1A receptors များအပေါ်တွင်သက်ရောက်မှုရှိသည်ကိုသုတေသီများကတွေ့ရှိခဲ့သည်။ CBD အားအကျိုးရှိရန် BDNF သို့ ဦး နှောက်မှဆင်းသက်သောအာရုံကြောဆိုင်ရာအချက်တစ်ချက်ကိုအသက်သွင်းရန်လိုအပ်ကြောင်းကိုလည်းရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။
သို့သော်ဤလေ့လာမှုသည်တိရစ္ဆာန်ပုံစံများပေါ်တွင် CBD ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုအာရုံစိုက်ပြီးတူညီသောရလဒ်များကိုလူသားများအတွက်ထုတ်လုပ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ထို့ကြောင့် CBD သည်လူသားများအားစိတ်ကြွဆေးနှင့်စိတ်ကျရောဂါကိုဆန့်ကျင်မှုရှိမရှိအကဲဖြတ်ရန်လေ့လာမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဤဘရာဇီးနှစ်ထပ်မျက်မမြင်၊ ကျပန်းလက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွင် CBD အသုံးပြုမှုသည်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုအကဲဖြတ်ရန် placebo ကိုအကဲဖြတ်ခဲ့ပြီးတိရိစ္ဆာန်များ၌ CBD ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုလူသားများကဲ့သို့အတုယူသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ CBD အသုံးပြုခြင်းသည်လူသားများအားစိုးရိမ်သောကနှင့်စိတ်ကျရောဂါကိုလျှော့ချရန်အလားအလာရှိသည်။
Cannabidiol အဆီနှင့်အမှုန့်များကို Colorado တက္ကသိုလ်မှဆရာ ၀ န်များကထုတ်ဝေသောအစီရင်ခံစာတစ်ခုအရကလေးစိုးရိမ်စိတ်နှင့် PTSD ရောဂါများကိုကုသခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲခြင်းတို့တွင်ကြီးမားသောအခန်းကဏ္မှပါဝင်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။
ကင်ဆာနှင့်ကင်ဆာကုသမှုသည်ပျို့ခြင်း၊ အန်ခြင်းနှင့်နာကျင်ခြင်းကဲ့သို့သောသီးခြားလက္ခဏာများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အထူးသဖြင့်၎င်းတို့သည်ကင်ဆာကုသမှုတိုင်းတွင်ပြန်ဖြစ်သည့်အခါအထူးသဖြင့်ထိန်းချုပ်ရန်ခက်ခဲသည်။ သို့သော်မကြာသေးမီကပြုလုပ်ခဲ့သောလေ့လာချက်များအရအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောကင်ဆာကဲ့သို့ရောဂါလက္ခဏာများကို CBD (သို့) CBD နှင့် THC ပေါင်းစပ်။ စီမံနိုင်သည်။
ဗြိတိန်၌လူနာ ၁၇၇ ဦး ကိုလေ့လာမှုတစ်ခုအရ CBD နှင့် THC ပေါင်းစပ်မှု၏ဘေးကင်းမှုနှင့်ထိရောက်မှုကိုကင်ဆာနှင့်ပတ်သက်သောဝေဒနာခံစားနေရသောလူနာများတွင် nonopioid အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးအဖြစ်စမ်းသပ်ခဲ့သည်။ လေ့လာမှု၏အဓိကရလဒ်များသည် CBD နှင့် THC အရောကိုယူသောလူနာအများစုသည် placebo အုပ်စုထက်နှစ်ဆနီးပါးနာကျင်မှုသိသိသာသာကျဆင်းသွားကြောင်းတင်ပြခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ကင်ဆာလူနာများအတွက်နာကျင်မှုကိုကုသခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲရာတွင် cannabinoids နှစ်ခုလုံး၏ထိရောက်မှုကိုပြသည်။
ထို့ပြင်လေ့လာမှုတစ်ခုတွင်သုတေသီများသည်ကင်ဆာကုသမှုအများစုတွင်၎င်းတို့နှင့်ဆက်စပ်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများစွာရှိသောကြောင့်ဤအလားအလာရှိသောကုသမှုသစ်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ CBD နှင့် THC ကိုလူနာများကကောင်းစွာသည်းခံခဲ့ပြီးပေါင်းစပ်မှုသည်ပြောစရာမရှိသောမည်သည့်ဆိုးကျိုးကိုမျှမဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။
ဓာတုကုထုံးသည်ကင်ဆာအမျိုးအစားအားလုံးနီးပါးအတွက်အသုံးအများဆုံးကုသမှုဖြစ်သော်လည်း၎င်းကိုလူ့ခန္ဓာကိုယ်မှကောင်းစွာသည်းမခံနိုင်ခြင်းနှင့်ကျန်းမာရေးအရည်အသွေးကိုထိခိုက်စေနိုင်သည်။ ဓာတုကုထုံးခံယူနေသည့် လူနာအားလုံးနီးပါးတွင် တွေ့ရသည့် အဓိကဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတစ်ခုမှာ ဓာတုကုထုံးကြောင့် ပျို့အန်ခြင်း သို့မဟုတ် CINV ဖြစ်သည်။ antiemetic ဆေးဝါးအများအပြားရှိသော်လည်း၊ အချို့သောအထူးသဖြင့် CINV အတွက်အမြဲတမ်းထိရောက်မှုမရှိပါ။ သို့သော် Barcelona တွင်ပြုလုပ်သောသုတေသနပြုချက်အရ CBD သုံးစွဲမှုသည် CINV အတွက်အထူးထုတ်လုပ်ထားသော antiemetic ဆေးဝါးများထက်ပိုမိုထိရောက်မှုရှိသော CINV ခံစားနေရသောလူနာများကိုသက်သာရာရစေနိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။
uro Neuroprotective ဂုဏ်သတ္တိများ
CBD သည်ကွဲပြားသောအာရုံကြော transmitter receptors များနှင့် cannabinoid receptors များကိုဤအပြုသဘောသက်ရောက်မှုများထုတ်လုပ်ရန်ပစ်မှတ်ထားသော neuropsychiatric ရောဂါများကိုဆန့်ကျင်သည့်အကျိုးကျေးဇူးများစွာရှိသည်။ Epidiolex CBD ဆေးသည် Epilepsy နှင့်အခြား seizure ရောဂါများကြောင့် seizures ကိုကုသရန်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ FDA နှင့်ကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်များမှထောက်ခံသည်။
ဤအကျိုးကျေးဇူးများကိုပေးသောအားဖြင့် Alzheimer’s နှင့် Multiple Sclerosis ကဲ့သို့အခြားအာရုံကြောဆိုင်ရာရောဂါများတွင် CBD ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလေ့လာရန်သုတေသနများစွာကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
ဂျာမနီတွင်ပြုလုပ်သောလေ့လာမှုတစ်ခုသည်နဗ်ကြောရောင်ရောဂါ (SoOx) သည်နဗ်ကြောကြွက်သားများပေါ်တွင်ဖြစ်ပေါ်သောနဗ်ကြောများပေါ်တွင်ဖြစ်ပေါ်သောရောဂါများကိုလေ့လာခဲ့သည်။ ဤလူနာများကိုကုသမှုခံနိုင်ရည်ရှိသောကြွက်သားများတောင့်တင်းခြင်းနှင့် CBD ဆေးဖြန်းခြင်းများကိုခံစားခဲ့ရပြီးဤလူနာများကိုလက်ရှိကုသမှုများအတွက်တွဲဖက်ကုထုံးအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။
မျိုးစုံနဗ်ကြောရောဂါသည်များသည် Sativex ကိုခံနိုင်ရည်ရှိပြီး Sativex စားသုံးမှုကြောင့်ဆိုးရွားသောတုံ့ပြန်မှုမရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ထို့ပြင် Sativex အသုံးပြုသူများသည်ကြွက်သားများအကြောဆွဲခြင်းနှင့်ကြွက်တက်ခြင်းဝေဒနာခံစားနေရသောလူနာများအတွက် CBD အဆီ၊ အမှုန့်များနှင့်ဖြန်းဆေးများကိုသုံးစွဲရန်အကြံပြုသည်။
Alzheimer လူနာများအပေါ် CBD ၏သက်ရောက်မှုကိုလေ့လာရန်ပြုလုပ်သောအခြားလေ့လာမှုတစ်ခုတွင် CBD သည် neuroprotective ဂုဏ်သတ္တိများရှိကြောင်းသက်သေပြနိုင်သည့်အလားအလာရှိသောရလဒ်များကိုပြခဲ့သည်။ လက်ရှိတွင်အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါသည်ကုသနိုင်သောပျောက်ကင်းနိုင်သော neurodegenerative ရောဂါတစ်ခုဖြစ်ပြီးတစ်ချိန်ကတိုးတက်မှုသို့နှေးကွေးသွားခြင်း (သို့) ပြောင်းပြန်လှန်နိုင်ခြင်းမရှိပေ။ သို့သော် ဦး နှောက်ဆဲလ်များပေါ်တွင် CBD ၏ CBD သက်ရောက်မှုသည်ပုံအသစ်တစ်ခုကိုပြသပြီး Alzheimer ဝေဒနာခံစားနေရသောလူနာများအတွက်မျှော်လင့်ချက်ပေးသည်။
CBD ၏ in vitro သက်ရောက်မှုများပေါ်တွင်ဖွဲ့စည်းထားသောဤသီအိုရီကိုတီထွင်ခြင်းအားဖြင့် Alzheimer's ကို CBD ဖြင့်ရန်လိုသောကုသမှုဖြင့်ပြောင်းပြန်လှန်နိုင်ခြင်းရှိမရှိလေ့လာရန်တိရစ္ဆာန်ပုံစံများတွင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ မှတ်ဥာဏ်ချို့ယွင်းမှုနှင့် gliosis ရှိသောကြွက်များသည်အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါ၏ရလဒ်အဖြစ် CBD အားဤလေ့လာမှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ပေးသည်။ CBD သည် ဦး နှောက်တွင်အမာရွတ်ဖြစ်ပေါ်မှုကိုလျော့ကျစေပြီး reactive gliosis ကြောင့်ဆဲလ်များဆုံးရှုံးမှုကိုတိုက်ဖျက်ရန် neurogenesis (သို့) ဦး နှောက်ဆဲလ်အသစ်များဖြစ်ပေါ်ခြင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ထို့ပြင် CBD သည်ကြွက်မော်ဒယ်များတွင်မြင်နိုင်သောမှတ်ဥာဏ်ချို့တဲ့မှုကိုပြောင်းပြန်ဖြစ်စေသည်၊ ထို့ကြောင့်အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါသည်နောင်၌ပြန်လှန်ကုသနိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်သည်။
ဤရလဒ်များကိုအများစုကိုတိရစ္ဆာန်ပုံစံများဖြင့်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီးဤရလဒ်များကို CBD အသုံးပြုမှုသည်ဂရုစိုက်မှုစံနှုန်းမဖြစ်မီလူသားများနှင့်လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများတွင်ပုံတူပွားရန်လိုသည်။
CBD သည်၎င်း၏ analgesic, anxiolytic နှင့် anti-inflammatory ဂုဏ်သတ္တိများကြောင့်ဆွဲအားကိုရရှိခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ဤ cannabinoid ၏ anti-inflammatory ဂုဏ်သတ္တိများဖြစ်ပြီး၎င်းကိုဝက်ခြံနှိမ်နင်းရေးကုသမှုတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုသည်။ ဝက်ခြံသည်ရောင်ရမ်းခြင်း၊ ဘက်တီးရီးယားများနှင့် sebum ထုတ်လုပ်မှုပိုများခြင်းတို့ကြောင့်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ CBD အဆီ၏ဤပိုင်ဆိုင်မှုကိုအကဲဖြတ်ရန်ပြုလုပ်သောလေ့လာမှုတစ်ခုတွင် CBD သည်ရောင်ရမ်းခြင်းကိုကာကွယ်ပေးပြီးအရေပြား၌ pro-acne inflammatory cytokines ၏အထွက်ကိုဟန့်တားခြင်းဖြင့်ရောင်ရမ်းနာကျင်သောရောင်ရမ်းနာများဖြစ်ပေါ်ခြင်းကိုကာကွယ်ပေးသည်။ ထို့ပြင်ဤလေ့လာမှုသည် CBD သည်၎င်း၏ထုတ်လုပ်မှုကိုပစ်မှတ်ထားခြင်းနှင့်၎င်းအားလျှော့ချခြင်းဖြင့်အရေပြားရှိ sebum အဆင့်ကိုပြောင်းလဲစေနိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။
CBD ကိုလက်ရှိတွင် skincare products များနှင့်လိမ်းဆေးများအဖြစ်ကြေငြာထားသောလိမ်းဆေးများတွင်သုံးနေပါသည်။ သို့ရာတွင်၎င်းထုတ်ကုန်သည်လူ၏အရေပြားတွင်စုပ်ယူနိုင်ရန်ကူညီရန်နည်းပညာတစ်မျိုးမျိုးပါ ၀ င်သောပစ္စည်းများရှာဖွေရန်အရေးကြီးသည်။ ၎င်းသည်အရေပြားထဲသို့စိမ့်ဝင်ပြီးအတွင်းမှရောင်ရမ်းမှုကိုလျော့နည်းစေသည်။
ips Antipsychotic ဂုဏ်သတ္တိများ
CBD ကို ဦး နှောက်အာရုံကြောဆိုင်ရာရောဂါများကိုစီမံရန်၎င်း၏စွမ်းရည်အတွက်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်၊ ထို့ကြောင့် CBD ၏အခြားဖြစ်နိုင်သော antipsychotic သက်ရောက်မှုများအပေါ်သုတေသနများစွာကိုလုပ်ဆောင်နေသည်။ ထိုလေ့လာမှုအများစုသည်အပြုသဘောဆောင်သောတုံ့ပြန်မှုကိုပြသခဲ့သည်။
ဆေးခြောက်သုံးစွဲခြင်းသည်စိတ်ရောဂါကဲ့သို့လက္ခဏာများနှင့်အတူနာတာရှည် ဦး နှောက်အာရုံကြောဆိုင်ရာပြဿနာကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ လေ့လာမှုအသစ်များအရ CBD အသုံးပြုခြင်းသည်ဆေးခြောက်သုံးစွဲမှု၏ရလဒ်အဖြစ်ဖွံ့ဖြိုးလာခြင်းနှင့် schizophrenia နှင့်မြင်သောစိတ်ရောဂါကိုစီမံခြင်းနှင့်တန်ပြန်ဆန့်ကျင်ခြင်းတို့တွင်အကျိုးရှိနိုင်သည်ဟုယူဆချက်ရှိသည်။ ၎င်းသည်တစ်ခါတစ်ရံ THC ၏စူးရှသောစီမံခန့်ခွဲမှုဖြင့်တွေ့ရသောစိတ်ရောဂါကိုလည်းပြောင်းပြန်ဖြစ်စေနိုင်သည်။
ဤရလဒ်များတွင် CBD ၌ antipsychotic ဂုဏ်သတ္တိများပါ ၀ င်သည်၊ ဤအကျိုးကျေးဇူးများသည်ဆေးဝါးများအတွက်အလွန်အဖိုးတန်သောကြောင့်ထပ်မံအကဲဖြတ်ရန်လိုသည်။
စွဲလမ်းစေသောရောဂါများသည်အာရုံစူးစိုက်မှုဆားကစ်များပေါ်ရှိမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏လုပ်ဆောင်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးလူတို့သည်ဤမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုမှီခိုအားထားလာကြသည်။ သုတေသီများကပြုလုပ်သောစာပေပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းတွင် CBD ကိုစွဲလမ်းစေသောရောဂါများကိုအလားအလာရှိသောကုသမှုတစ်ခုအနေနှင့် CBD သည်ဤအာရုံကြောဆားကစ်များနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်ပြီး၎င်းတို့ကိုတားစီးနိုင်ပြီး၎င်းထုတ်ကုန်များအပေါ်တပ်မက်မှုလျော့နည်းလာသည်။
စာပေပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းတွင်လေ့လာမှု ၁၄ ခုပါ ၀ င်ပြီး ၉ ခုမှာတိရိစ္ဆာန်များ၊ အထူးသဖြင့်ကြွက်များဖြစ်သည်။ CBD သည် opioids၊ ကိုကင်း၊ psychostimulant၊ စီးကရက်နှင့်ဆေးခြောက်စွဲခြင်းကိုအထူးအကျိုးပြုသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ သို့သော်လည်းရလဒ်များသည်ပဏာမရလဒ်များဖြစ်ခဲ့ပြီးရလဒ်များကိုလူအများလက်ခံနိုင်မှုမရှိမီနောက်ထပ်ရလဒ်များကိုထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးပါ။
ဆီးချိုရောဂါသည်ကမ္ဘာ့လူ ဦး ရေ၏ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းကိုထိခိုက်စေသောကြီးမားသောပြဿနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ တိရိစ္ဆန်မော်ဒယ်များအပေါ်ကောက်ယူထားသောမကြာသေးမီကလေ့လာတွေ့ရှိချက်အရအဝလွန်မဟုတ်သောကြွက်များတွင် CBD ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ဆီးချိုရောဂါဖြစ်ပွားမှုကိုသိသိသာသာကျဆင်းစေနိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဤလေ့လာမှုတွင်ကြားဝင်အုပ်စုနှင့်အိပ်ဆေးအုပ်စုအကြားဆီးချိုဖြစ်ပွားမှုကို ၈၆ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိသိသိသာသာကျဆင်းစေသည်။
ထို့ပြင်ဤလေ့လာမှုတွင် CBD အသုံးပြုခြင်းသည် anti-inflammatory ဂုဏ်သတ္တိနှင့် cannabinoid ၏ immunomodulatory သက်ရောက်မှုများကြောင့်ဆီးချိုရောဂါဖြစ်ပွားမှုကိုလျော့ကျစေနိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဤတိရိစ္ဆာန်ပုံစံများတွင် CBD အသုံးပြုခြင်းသည်ဆီးချိုရောဂါအတွက်အင်ဆူလင်လျှော့ချရေးကိုအဓိကတာဝန်ယူသောယန္တရားများဖြစ်သော destructive insulitis ကိုစတင်နှောင့်နှေးစေခဲ့သည်။
CBD သည်အသုံးပြုသူများအတွက်လျှောက်လွှာလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကိုပိုမိုလွယ်ကူစေရန်ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့်ရနိုင်သောကျယ်ပြန့်စွာရရှိနိုင်သည့်ဒြပ်ပေါင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ CBD ကိုအသုံးချခြင်း (သို့) သုံးခြင်း၏အသုံးအများဆုံးနည်းလမ်းများတွင်ပါဝင်သည်၊ သို့သော်ကန့်သတ်မထားပါ။
→ CBD လိမ်းဆေးများ
ဤလိမ်းဆေးများတွင် CBD ပါ ၀ င်ပြီးနာကျင်မှု၊ ရောင်ရမ်းခြင်း၊ ရောင်ရမ်းခြင်း၊ အရေပြားယားယံခြင်းနှင့် ၀ က်ခြံများကိုစီမံခန့်ခွဲရန်သုံးသည်။ CBD လိမ်းခရင်မ်ကိုမည်သည့်အသားအရည်ထိန်းသိမ်းမှုပစ္စည်းမဆိုသုံးသင့်ပြီးကုသမှုလိုအပ်သောအရေပြား၏အစိတ်အပိုင်းကိုလိမ်းသင့်သည်။
CBD လိမ်းဆေးများနှင့်လိမ်းဆေးများကို ၀ ယ်သောအခါ CBD ကဲ့သို့လိမ်းဆေး၏ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုအရေပြားမှစုပ် ယူ၍ အတွင်းမှကုသပေးသော nanotechnology သို့မဟုတ် micellization တစ်မျိုးမျိုးရှိသောထုတ်ကုန်ကို ၀ ယ်ရန်အရေးကြီးသည်။ ဤစုပ်ယူမှုယန္တရားများမရှိလျှင် CBD ပါ ၀ င်သောလိမ်းဆေးများသည်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်သာရှိနေပြီးမည်သည့်အကျိုးအာနိသင်ကိုမျှထုတ်လုပ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
→ CBD အငွေ့များ
အငွေ့မှတဆင့်ရှူရှိုက်လိုက်သောအခါ CBD သည် CBD ကိုခန္ဓာကိုယ်အတွင်းလျင်မြန်စွာစုပ်ယူနိုင်ပြီးအခြားမည်သည့်ပုံစံထက်မဆိုပိုမိုအကျိုးကျေးဇူးများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ၎င်းသည်အဆုတ်ထဲသို့ရှူသွင်းပြီးသွေးကြောထဲသို့ဖြတ်သန်းသွားသောအခါ CBD သည် vape တစ်ခုရှိ CBD သည်ပုံမှန်အားဖြင့်ကြာရှည်စေပြီး CBD ၏လျင်မြန်သောလုပ်ဆောင်ချက်ကိုကာကွယ်ပေးသည်။ ၎င်းသည် CBD အငွေ့များနှင့်မသက်ဆိုင်ဘဲနှင့် CBD အသုံးပြုမှု၏ဤနည်းလမ်းသည်လူငယ်များကြားတွင်အထူးကျော်ကြားသည်။ CBD သည် vape ပုံစံဖြင့်သုံးသောအခါလျင်မြန်သောလုပ်ဆောင်ချက်ရှိသော်လည်း၎င်းသည်လျင်မြန်သောဇီဝြဖစ်မှုနှင့်သွေးစီးကြောင်း၌ ၁၀ မိနစ်ခန့်သာရှိသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ CBD အငွေ့များ၏ထိရောက်မှုသည် ၁၀ မိနစ်ကြာသည်။
သို့သော်အငွေ့သည် CBD သို့မဟုတ်အခြားမည်သည့်ထုတ်ကုန်ကိုမဆိုသုံးသောကျန်းမာသောနည်းလမ်းမဟုတ်ပါ။ Vaping သည်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းထက်ပိုကျန်းမာသည်ဟုယူဆသော်လည်း၎င်းသည်ကျန်းမာရေးနှင့်မညီညွတ်။ အထူးသဖြင့် CBD ၏အခြားပုံစံများကိုအလွယ်တကူရနိုင်သောနှင့်ရရှိနိုင်သည့်အတွက်ရှောင်ရှားရန်လိုအပ်သည်။
→ CBD Capsules နှင့် Tablets
ဤ CBD ၏ပုံစံသည် CBD စားသုံးမှု၏အများဆုံးထိန်းညှိထားသောပုံစံဖြစ်ပြီးသုံးစွဲသူများသည်၎င်းတို့၏ ဦး စားပေးနှင့်လိုအပ်ချက်များအပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားသောသီးခြားသတ်မှတ်ထားသောဆေးများကိုစားသုံးရန်ခွင့်ပြုသည်။ CBD ဆေးတောင့်နှင့်ဆေးပြားများအတွက်ပုံမှန်သောက်သုံးသောပမာဏသည် ၅ မီလီဂရမ်နှင့် ၂၅ မီလီဂရမ်ဖြစ်သည်။
→ CBD အာရုံစူးစိုက်မှု
နာမည်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း CBD အာရုံစူးစိုက်မှုတွင် CBD ၏စုစည်းမှုပုံစံပါ ၀ င်သည်။ ပျမ်းမျှအားဖြင့်ဤထုတ်ကုန်များသည်အက်ပလီကေးရှင်းနှင့် လာ၍ အခြား CBD ထုတ်ကုန်များနှင့်ပုံစံများထက်အဆတစ်ရာပိုမိုစုစည်းသည်။ အမှုန့်ပုံစံဖြင့်ရနိုင်သည်၊ ၎င်းကိုမျိုမချမီ CBD အား sublingual အဖြစ်ကောင်းစွာစုပ်ယူပြီးနောက်ပထမဆင့်ဇီဝြဖစ်စဉ်မှတဆင့် sublingually အဖြစ်ကောင်းစွာစုပ်ယူနိုင်စေရန်ပါးစပ်ထဲတွင်ထားသင့်သည်။
→ CBD ဆီနှင့် Tinctures
CBD အဆီနှင့် tinctures များတွင်များသောအားဖြင့် ၁၀၀ မီလီဂရမ်မှ ၁၅၀၀ မီလီဂရမ်အထိမြင့်မားသော CBD ပါ ၀ င်သည်။ ဤအရာများအားပါးစပ်ဖြင့်စားသုံးသောကြောင့်၎င်းသည်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်နိုင်ခြေကိုမြင့်တက်စေပြီး CBD ၏အကျိုးအာနိသင်များကိုလျော့ကျစေသောကြောင့်အလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ရန်အရေးကြီးသည်။
→ CBD မှုတ်ဆေး
ဤ CBD ၏ပုံစံသည်အသုံးချမှုပုံစံအသစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးအခြားပုံစံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် CBD ၏အနိမ့်ဆုံးအာရုံစူးစိုက်မှုရှိသည်။ ဤဆေးဖြန်းများတွင် CBD ၏ပုံမှန်ပါဝင်မှုသည်ဆေးဖြန်းနှုန်း ၁ မီလီဂရမ်မှ ၃ မီလီဂရမ်အထိရှိသည်။
CBD သည်လူငယ်လူရွယ်များနှင့်သက်လတ်ပိုင်းပုဂ္ဂိုလ်များတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုလျက်ရှိသောကျယ်ပြန့်သောနာမည်ကြီးထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် cannabidiol အမှုန့်တွင်သိပ္ပံနည်းကျသက်သေပြနိုင်သောအကျိုးကျေးဇူးများစွာရှိသည်မှန်သော်လည်း၎င်းအကျိုးကျေးဇူးများနှင့်အတူ CBD အသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအချို့ရှိသည်ကိုသတိပြုရန်အရေးကြီးသည်။ CBD ကိုပါးစပ်မှသို့မဟုတ်ပါးစပ်မှတဆင့်ယူသောအခါဤဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုမြင်ရသည်။ ကွဲပြားသောလျှောက်လွှာပုံစံများဖြင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုသိရန်လုံလောက်သောသုတေသနမလုပ်ဆောင်ပါ။
သွေးပေါင်ကျခြင်း (သို့) hypotension နည်းခြင်း
ပါးစပ်ခြောက်ခြင်း (သို့) Xerostomia
ဤဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအများစုသည်မပြင်းထန်ဘဲအလိုအလျောက်ပြေလည်သွားလိမ့်မည်။ CBD ထုတ်ကုန်များကိုတစ်နေ့လျှင် ၂၀၀ မီလီဂရမ်အထိစိတ်ချရသောပမာဏဖြင့် ၁၃ ရက်ဆက်တိုက်အသုံးပြုနိုင်ပြီး Epidiolex အားဆေးကို ၂၀၀ မီလီဂရမ်ထက်ပိုများသောပမာဏတွင်သောက်သုံးရန်ခွင့်ပြုထားပါကပြင်းထန်သောအသည်းဒဏ်ရာနှင့်ဆက်စပ်သည်။ ရှားပါးသောနောက်ဆက်တွဲတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း
CBD ကိုယေဘုယျအားဖြင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူလူငယ်လူရွယ်အုပ်စုအများစုကကောင်းကောင်းသည်းခံနိုင်တယ်လို့ယူဆထားပြီးဒီလူ ဦး ရေအတွက်သိသာထင်ရှားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုတောင်ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ သို့သော်၊ CBD ကိုစိတ် ၀ င်စားသောသူအချို့အတွက်အထူးသတိထားရမည့်အထူးသတိထားရမည့်အချက်များကိုသတိပြုရန်အရေးကြီးသည်။ ဤကြိုတင်ကာကွယ်မှုများသည်အသည်းရောဂါ (သို့) ပါကင်ဆန်ရောဂါခံစားနေရသူများအတွက်ဖြစ်သည်။ ဤအခြေအနေများသည် CBD ထုတ်ကုန်များ၏ထိရောက်မှုကိုပြောင်းလဲစေပြီး CBD ကိုရွေးချယ်ရန်ဤလူနာများကိုအထူးဂရုစိုက်သင့်သည်။
အသည်းရောဂါရှိသောလူနာများသည် CBD ကိုယူနိုင်သော်လည်း၊ သူတို့၏အသည်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ထုတ်ကုန်များကိုမချေဖျက်နိုင်သဖြင့်၎င်းတို့သည် CBD ၏အနိမ့်ဆေးများကိုယူရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ သုတေသနများအရ CBD အဆင့်နိမ့်သည်ရောဂါရှိသောအသည်းအားထိခိုက်စေခြင်းသို့မဟုတ်ဖိအားမပေးခြင်းတို့ကြောင့်ဤလူနာများသည် CBD ထုတ်ကုန်များကိုလုံခြုံစွာ ၀ ယ်ယူနိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည်။
ပါကင်ဆန်ရောဂါခံစားနေရသောလူနာများသည်အနားယူခြင်းတုန်ခြင်းနှင့်မလျော်ကန်သောကြွက်သားများလှုပ်ရှားခြင်း၏အဓိကလက္ခဏာများရှိသည်။ ဤလက္ခဏာများကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်ပုံကြီးချဲ့သည်ဟုယူဆရသည် CBD ထုတ်ကုန်ထို့ကြောင့်ပါကင်ဆန်လူနာများသည်ဤထုတ်ကုန်များထဲမှတစ်ခုခုကိုရှောင်ကြဉ်ရန်လိုအပ်သည်။
CBD ထုတ်ကုန်များကိုကလေးများအတွက်လည်းမထောက်ခံပါ၊ ၎င်းအသက်အရွယ်အုပ်စုအပေါ်မည်သို့သက်ရောက်မှုရှိမည်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါ။ အဖျားတက်ခြင်းကိုကုသရန်နှင့်ကုသရန်သုံးသောဆေးဝါးဖြစ်သော Epidiolex ကိုဤအဖျားရောဂါများခံစားနေရသောကလေးများအားပုံမှန်အားဖြင့်သတ်မှတ်သည်။ အက်ဖ်ဒီအေ၏အဆိုအရဆေးသည်ကလေးများအတွက်စိတ်ချရသော်လည်းအခြားမည်သည်ကိုမသိပါ CBD ထုတ်ကုန် ကလေးများအတွက်အန္တရာယ်ကင်းသည်သို့မဟုတ်ထိရောက်မှုရှိသည်။ နောက်ထပ်သုတေသနမပြုလုပ်မချင်း Epidiolex မှကလေးများအား CBD ထုတ်ကုန်များပေးခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများနှင့်နို့တိုက်နေသောအမျိုးသမီးများသည်လည်းကြိုတင်ကာကွယ်မှုများပြုလုပ်ရန်နှင့် CBD ထုတ်ကုန်များသုံးစွဲခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။ သို့သော်၎င်းသည်အတိအကျမသိရသေးသော CBD ၏သက်ရောက်မှုကြောင့်မဟုတ်ဘဲဤထုတ်ကုန်များသည်အမျိုးသမီးသို့မဟုတ်ကြီးထွားမှုအတွက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောအဆိပ်များသို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းစေသောအရာများကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ လူတိုင်းကသူတို့သုံးတဲ့ထုတ်ကုန်တွေရဲ့လုံခြုံမှုကိုသေချာဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ဒီကာလအတွင်း CBD ထုတ်ကုန်တွေကိုလုံး ၀ ရှောင်တာအကောင်းဆုံးဘဲ။
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောအထူးကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ မှလွဲ၍ CBD နှင့်ဖြစ်နိုင်သောမူးယစ်ဆေးဝါးအပြန်အလှန်ပတ်သက်မှုကိုဘာမျှမသိပါ။
AASraw တွင်ထုတ်လုပ်သော CBD ထုတ်ကုန်များသည်မည်သည့်ပုံစံများဖြစ်သနည်း။
AASraw သည် steroid အမှုန့်များ၊ လိင်ဟော်မုန်းများနှင့်ထက်မြက်သောဆေးဝါးများအတွက်စိတ်ချရသောအရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ AASraw သည်အရည်အသွေးမြင့်၊ စိတ်ချရမှုနှင့်ထိရောက်မှုရှိသော CBD ထုတ်ကုန်များကိုထုတ်လုပ်သော CBD ခွဲထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး လည်းဖြစ်သည်။ CBD သည်ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့်ရနိုင်သောစွယ်စုံထုတ်ကုန်ဖြစ်သော်လည်းထုတ်လုပ်သူအားလုံးသည် CBD ၏ပုံစံအမျိုးမျိုးကိုထုတ်လုပ်ပြီးထုတ်လုပ်သည်မဟုတ်။ CBD စက်ရုံတစ်ခုသည်ကွဲပြားခြားနားသောထုတ်ကုန်ပုံစံများကိုထုတ်လုပ်နိုင်ပြီးထုတ်ကုန်၏အရည်အသွေးနှင့်လုံခြုံမှုကိုအကောင်းဆုံးအာရုံစိုက်နိုင်မည့်ပုံစံမျိုးမဟုတ်ပေ။
AASraw သည် CBD အမှုန့်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပြီး၎င်းကိုလည်းထုတ်လုပ်သည် CBD အဆီများ၎င်းနှစ်ခုစလုံးသည်အလွန်လူကြိုက်များပြီးအလွန် ၀ ယ်လိုအားဖြစ်သည်။ AASraw မှ ထုတ်လုပ်သော ထုတ်ကုန်များ ပါဝင်သည်။
→ CBD အမှုန့်
CBD အမှုန့် (သို့) အာရုံစူးစိုက်မှုသည်လူအများစုနှင့်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ထုတ်လုပ်ပြီးရောင်း ၀ ယ်သော cannabidiol ပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်သည် CBD အမှုန့်ဝယ်ပါ ၎င်းသည်အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီးရလဒ်များထုတ်လုပ်ရာတွင်အကျိုးရှိသည်။ AASraw သည်ရောင်း ၀ ယ်နိုင်သော CBD အမှုန့်အမျိုးအစားအတိအကျရှိသည်၊ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးလမ်းညွှန်ချက်များနှင့်တိကျသေချာမှုများကိုတိကျစွာလိုက်နာသောစက်ရုံတစ်ခုတွင်ထုတ်လုပ်သည်။ ၎င်းသည် AASraw၊ CBD အမှုန့်ထုတ်လုပ်သူနှင့် CBD အမှုန့်ပေးသွင်းသူ AASraw မှထုတ်ကုန်များ၏လုံခြုံမှုနှင့်ထိရောက်မှုကိုအာမခံသည်။
CBD အမှုန့်ထုတ်လုပ်သူသည်ထုတ်ကုန်များသည် CBD စက်ရုံမှထုတ်လုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်ထုပ်ပိုးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းမည်သည့်အဆိပ်များသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ဖြစ်စေသောအရာများနှင့်မညစ်ညမ်းကြောင်းသေချာစေပါသည်။ ထို့ပြင် AASraw သည်အရည်အသွေးပြဿနာများရှားပါးဖြစ်ပွားမှု၌၎င်းကိုအသုတ်တွင်ထုတ်လုပ်သောထုတ်ကုန်အားလုံးကိုခြေရာခံပြီးပြန်လည်မှတ်မိစေသည်။
AASraw မှထုတ်လုပ်သော CBD အမှုန့်ကိုရေတွင်ပျော်ဝင်နိုင်သော CBD အမှုန့်ဟုရည်ညွှန်းပြီး၎င်းတွင် ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း CBD ပါ ၀ င်သောအဖြူရောင်အမှုန့်မှအဖြူရောင်ဖြစ်သည်။ ဤထုတ်ကုန်သည် THC ကင်းစင်ပြီးအခြားအမှုန့် ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းကို CBD ၏အကျိုးအာနိသင်များကိုချဲ့ကားရန်နှင့်ထုတ်ကုန်ကိုအတူတကွရှိနေရန်နှင့်ကြာရှည်ကြာရှည်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
ရေတွင်ပျော်ဝင်နိုင်သော CBD အမှုန့်ကိုယူရန်လိုအပ်သောအခါအရည်ပျော်စေရန်ရေနှင့်ရောရန်လိုအပ်သည်။ aqueous solution သည်နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ရောနှောပြီးအဖြေကိုအမြှုပ်ထစေနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ထုတ်ကုန်၏ပုံမှန်ဖွဲ့စည်းမှုဖြစ်ပြီး၎င်းကိုမည်သို့ယူသင့်သည်။
CBD အမှုန့်ကိုနေရောင်ခြည်နှင့်ထိုက်တန်စွာသိုလှောင်ထားသင့်သည်ကိုသတိပြုရန်အရေးကြီးသည်။ ထို့ပြင်အမှုန့်သည်အမှုန့်နှင့်ဓာတ်ပြုနိုင်သကဲ့သို့အမှုန့်သည်အက်ဆစ်သို့မဟုတ်အောက်ခြေတစ်ခုနှင့်မထိတွေ့သင့်ပါ။
→ CBD ဆီများ
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း CBD ဆီများသည်၎င်းတို့တွင်မြင့်မားသောအာရုံစူးစိုက်မှုရှိသောကြောင့် CBD ၏အစွမ်းထက်ပုံစံများဖြစ်သည် CBD အခြားပုံစံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။ AASraw ၏ CBD အဆီအားလုံးကို CBD အဆီ၏အာနိသင်နှင့်ထိရောက်မှုကိုအာမခံသော Good Manufacturing Practices သို့မဟုတ် GMP အသိအမှတ်ပြုစက်ရုံတွင်ထုတ်လုပ်သည်။ AASraw မှထုတ်လုပ်သော CBD ဆီများနှင့်အခြားထုတ်ကုန်များအားလုံးသည်၎င်းတို့၏ထုတ်ကုန်များတွင်ညစ်ညမ်းမှုမရှိစေရန်နှင့်၎င်းတို့ကိုအတတ်နိုင်ဆုံးစုစည်းထားသည်။
အောက်ပါတို့၌ AASraw မှထုတ်လုပ်သော CBD ဆီနှစ်မျိုးကွဲပြားသည်။
· Hemp Essential ဆီ
အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်းဤထုတ်ကုန်များ၏အကျိုးကျေးဇူးများစွာကြောင့် CBD Hemp Oils သည်လူကြိုက်များလာသည်။ ဆီများသည်အထူးသဖြင့် CBD ၏အတော်လေးမြင့်မားသောဆံ့များဖြစ်သောကြောင့်အခြား CBD ထုတ်ကုန်များထက် ပို၍ ကျော်ကြားသည်။
Hemp Essential Oil မှပြုလုပ်သည် AASraw ၎င်းသည်အလွန်အာရုံစူးစိုက်ပြီးတည်ငြိမ်သောအဆီ၊ အနက်ရောင်နှင့်အဝါရောင်ဖြစ်သည်။ ထုတ်ကုန်၏အမြင့်ဆုံးအကျိုးကျေးဇူးများနှင့်ထုတ်ကုန်သက်တမ်းကြာရှည်ခံစေရန်၎င်းကိုအခန်းအပူချိန်နှင့်နေရောင်ခြည်နှင့်ဝေးဝေးထားသင့်သည်။ AASraw's CBD စက်ရုံမှဤထုတ်ကုန်သည် CBD (သို့) မှိုင်းရောင်စဉ် cannabinoids နှင့်တတိယကွဲပြားသောစမ်းသပ်မှုများနှင့်ရရှိနိုင်ပါသည်။
ဤထုတ်ကုန်သည်ဟလာလ်၊ Kosher နှင့် THC လုံးဝမပါဘဲလျှော်ပင်၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတက်ကြွမှုမရှိသော cannabinoids များနှင့်ပြည့်နေသည်။
AASraw မှ Golden Hemp ရေနံသည်တတိယအဖွဲ့အစည်းမှစမ်းသပ်ပြီးအရည်အသွေးမြင့် cannabinoid အပြည့်အ ၀ ရောင်စဉ် cannabinoids အပြည့်အ ၀ ရှိသည်။ ဤအဝါရောင်မှအညိုရောင်မှအညိုရောင်သို့အညိုရောင် semi-viscous ဆီများကိုထုပ်ပိုးမှုအမျိုးမျိုးတွင်ရောင်းချပြီး၎င်းအားအထူးသဖြင့်ဆီ၌ CBD ၏အာရုံစူးစိုက်မှုပိုမိုလိုအပ်ပါက၎င်းကို AASraw's CBD စက်ရုံမှတိုက်ရိုက် ၀ ယ်ယူနိုင်ပါသည်။
သိုလှောင်မှုနှင့်ပတ်သက်သောအထူးအကြံပြုချက်များပါ ၀ င်သည်မသင့်လျော်သောသိုလှောင်မှုသည်ထုတ်ကုန်ကိုမထိရောက်စေနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤထုတ်ကုန်ရှိ cannabinoids များသည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှပုံဆောင်ခဲဖြစ်စေနိုင်သည်ကိုသိရန်လည်းအရေးကြီးသည်။ ဤထုတ်ကုန်သည်အသုံးမ ၀ င်ဟုမဆိုလိုပါ၊ ၎င်းကိုရေနွေးဖြင့်ရေချိုးခြင်းဖြင့်ဆီကိုအပူပေးရုံဖြင့် crystals ကိုပျော်စေပြီး၎င်းကိုအဆီကိုယခင်အတိုင်းသုံးခွင့်ပြုသည်။
များစွာသော CBD အမှုန့်ထုတ်လုပ်သူများသည်သူတို့၏ထုတ်ကုန်များတွင်အရည်အသွေးမြင့် CBD များပါ ၀ င်သည်ဆိုသော်လည်းအမှန်တရားနှင့်ဝေးတတ်သည်။ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုလမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်းလိုက်နာပြီးထုတ်ကုန်၏ဘေးကင်းမှု၊ ထိရောက်မှုနှင့်အာနိသင်များသေချာစေရန်မှန်ကန်သောရောင်းချသူများထံမှ CBD အမှုန့်ကို ၀ ယ်ရန်အရေးကြီးသည်။
ထို့ပြင်၎င်းသည် CBD အမှုန့်ထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်းသူကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်ရုံသာမကဘဲတတိယပါတီများမှထုတ်ကုန်များကိုပေးသော CBD အမှုန့်များကို ၀ ယ်ရန်စျေးကွက်များသို့မပို့မီ၎င်းကိုထပ်မံဖြည့်စွက်သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောစားသုံးသူများကအသုံးပြုသည်။ ထုတ်ကုန်တစ်ခုသည်ဤတတိယအဖွဲ့အစည်းဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်မှုမအောင်မြင်ပါကထုတ်ကုန်သည်အရည်အသွေးစစ်ဆေးမှုမအောင်မြင်ပါ၊ ၎င်းအားထုတ်ကုန်အသစ်များမထုတ်လုပ်မီထိုပြဿနာများကိုဖြေရှင်းရန်၎င်းအားထုတ်လုပ်သူအားမကျေမနပ်ဖြစ်ရမည်။
အထူးသဖြင့် CBD လက်ကား ၀ ယ်သောအခါသို့မဟုတ် CBD အမှုန့်အမြောက်အများမှာယူခြင်းအားဖြင့်ပိုလျှံနိုင်သောနောက်ဆုံးထုတ်ကုန်နှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့်ပြဿနာကိုမဆိုရှောင်ရှားရန်ထုတ်ကုန်နှင့်ထုတ်လုပ်သူကိုသေချာစွာသုတေသနပြုရန်အရေးကြီးသည်။ CBD ၏အမြင့်ဆုံးအကျိုးကျေးဇူးများကိုလိုအပ်ပါကထုတ်ကုန်တစ်ခု ၀ ယ်ယူသူများသည် CBD ၏ပမာဏနှင့် CBD တစ်ခုတည်းတို့ကြွယ်ဝစေရန်ထုတ်လုပ်သူအားနောက်ထပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်ခုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ ထုတ်ကုန်တွင် CBD ၏သက်ရောက်မှုကိုလျော့ကျစေခြင်းသို့မဟုတ်၎င်း၏စွမ်းရည်အပြည့်ဖြင့်လုပ်ဆောင်ခြင်းမှကာကွယ်သော THC သို့မဟုတ်အခြား cannabinoids များမပါသင့်ပါ။
 လူးကပ်စ CJ, Galettis P ကို, Schneider J ကို (နိုဝင်ဘာလ 2018) ။ "ဒီ pharmacokinetics နှင့် cannabinoids ၏ pharmacodynamics" ။ လက်တွေ့ဆေးဝါးဗေဒ၏ဗြိတိသျှဂျာနယ်။ 84 (11): 2477-2482 ။ Doi: 10.1111 / bcp.13710 ။ PMC 6177698. PMID 30001569 ။
 Zhang M. "မဟုတ်ပါ၊ CBD သည်နိုင်ငံ ၅၀ လုံးတွင်တရားဝင်" မဟုတ်ပါ။ Forbes မဂ္ဂဇင်း။ နိုဝင်ဘာလ 50, 27 ရယူရန်။
 Klein ကို C, Karanges အီး, Spiro A, Wong A, Spencer J, Huynh T, et al ။ (နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၁) ။ "Cannabidiol သည်Δ2011-tetrahydrocannabinol (THC) ၏အမူအကျင့်ဆိုင်ရာဆိုးကျိုးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်ကြွက်များတွင်စူးရှပြီးနာတာရှည်ကုသမှုပြုလုပ်နေစဉ် THC ဆေးဝါးထုတ်လုပ်မှုကိုပြောင်းလဲစေသည်" စိတ်ပညာ။9(218): 2-443 ။ Doi: 57 / s10.1007-00213-011-2342 ။ PMID 0. S21667074CID2။
 အဒမ် R ကို, Hunt က M, Clark က JH (1940) ။ "မင်နီဆိုးတားရိုင်းလျှော်တောင်၏ marihuana ထုတ်ယူမှုနှင့်သီးခြားထုတ်ထားသောထုတ်ကုန် cannabidiol ၏ဖွဲ့စည်းပုံ" အမေရိကန်ဓာတုလူ့အဖွဲ့အစည်း၏ဂျာနယ်။ 62 (1): 196-200 ။ Doi: 10.1021 / ja01858a058 ။ ISSN 0002-7863 ။
 Gaoni Y ကို, Mechoulam R ကို (1966) ။ "Hashish-VII cannabidiol ကို tetrahydrocannabinols သို့ isomerization" ။ Tetrahedron ။ 22 (4): 1481-1488 ။ Doi: 10.1016 / S0040-4020 (01) 99446-3
 Abernethy A, Schiller L (၂၀၁၀ ဇူလိုင်လ ၁၇ ရက်) ။ FDA သည်သိပ္ပံနည်းကျအခြေခံသည့် CBD နှင့်ပတ်သက်သည့်ပေါ်လစီကိုသံန္နိဌာန်ချထားသည် အမေရိကန်အစားအစာနှင့်ဆေးဝါးစီမံခန့်ခွဲမှု (FDA) ။ အောက်တိုဘာလ 17, 2019 ရယူရန်။
 Gunn L ကို, Haigh L ကို (ဇန်နဝါရီလ 29, 2019) ။ "ဗြိတိသျှစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့က CBD ကိုအစားအစာအသစ်တစ်ခုဟုယူမှတ်သည်။ ယူကေဈေးကွက်တွင်ရောင်းချခြင်းကိုတားဆီးရန်ကြိုးစားသည်" Nutrition Insight၊ CNS Media BV ။ ဇန်နဝါရီလ 2, 2019 ရယူရန်ဖေဖော်ဝါရီလ 1, 2019. ရက်နေ့တွင်မူရင်းကနေမော်ကွန်းတင်။
 အာနိုးက M (ဇူလိုင်လ 30, 2019) ။ “ ဆွီဒင်နိုင်ငံသည် CBD ရေနံဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအားသတ်မှတ်ခြင်းအားဖြင့်အီတလီနိုင်ငံနှင့်ပူးပေါင်းမည်” ဆေးခြောက်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များဂျာနယ်။ စက်တင်ဘာလ 3, 2020 ရယူရန်။
 "Cannabinoids, EU ဝတ္ထုအစားအစာစာရင်း (း ၁.၁) တွင်ရှာဖွေသည်" ဥရောပကော်မရှင်။ ဖေဖော်ဝါရီလ 1.1, 1 ရယူရန်ဇန်နဝါရီလ 2019, 1. ။
 Todorova အက်စ် "ဘူလ်ဂေးရီးယားတွင်ဆေးခြောက်ကြီးထွားလာခြင်း - တရားဝင်သော်လည်း၊ အဘိဓာန်။ စက်တင်ဘာလ 3, 2020 ရယူရန်။
 သြစတြေးလျအစိုးရကျန်းမာရေးကုထုံးဆိုင်ရာကုန်စည်များစီမံခန့်ခွဲမှုဌာန (24ပြီ ၂၄ ရက်၊ ၂၀၂၀) ။ "ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ခြင်း - အဆိပ်စံမှအဆိုပြုထားသောပြင်ဆင်ချက်များ - ပူးတွဲ ACMS / ACCS အစည်းအဝေးများ၊ ဇွန် ၂၀၂၀" ကုထုံးကုန်ပစ္စည်းအုပ်ချုပ်ရေး (TGA) ။ နိုဝင်ဘာလ 2020, 2020 ရယူရန်။
 "Cannabidiol နှင့်ဆက်စပ်သောထုတ်ကုန်များအတွက်သတိပေးစာနှင့်စမ်းသပ်မှုရလဒ်များ" ။ အမေရိကန်အစားအစာနှင့်ဆေးဝါးစီမံခန့်ခွဲမှု (FDA) ။ နိုဝင်ဘာလ 2, 2017 ရယူရန်ဇန်နဝါရီလ 2, 2018 ။
 Kogan L ကို, Hellyer P ကို, ဒေါင်းနင်း R ကို (2020) ။ "ခွေးတစ်ကောင်၏အရိုးပွရောဂါနှင့်ဆက်စပ်သောနာကျင်မှု - ရှေ့ပြေးလေ့လာမှုတစ်ခုအတွက်ရေနံထုတ်ယူခြင်း" ။ အမေရိကန်ဘက်စုံကုသရေးဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသင်းဂျာနယ်။ 58: 35-45 ။